लेख्न शुरू गर्न समय लाग्छ‚ शुरू गरेपछि लगातार लेख्छु हाम्रोमा यति धेरै जातजाति‚ संस्कृति छन्। त्यहाँ कथा भन्ने शैली पनि फरक छन्। त्यहाँबाट नयाँ चिज आउन सक्छ। नत्र त रामायण, हजुरआमाले राति राति भन्ने कथा जस्तो मात्र हुन्छ।
'अत्यधिक आयोडिन भेटियाे, तर ढिके नुन नै खानुस् भन्न सकिन्न' ‘घरसमम्म पुग्दा २० प्रतिशत उडेर जान सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर राखिएको आयोडिन भान्छामा पुग्दा पनि अहिले बढी नै देखिएको छ।’
‘निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी फैसला अब पुनरावलोकन हुँदैन’ ‘संविधानले नै भन्छ- सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नेपाल सरकार लगायत मुद्दाका पक्ष सबैले मान्नुपर्छ। सर्वोच्चको फैसला कानून सरह हुन्छ।’
‘माओवादीलाई नबोकेको भए कांग्रेसले ५० प्रतिशत ठाउँमा जित्ने रहेछ’ स्वतन्त्र उम्मेदवारी राजनीतिक व्यवस्था सुधारको अभियान हो, व्यवस्था विरुद्धको विद्रोह होइन। तर, कांग्रेस र एमाले नसुध्रिने हो भने नयाँ पार्टीको मार्ग फराकिलो हुँदै गएको देख्छु।
‘एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका काम नै हाम्रो जितको आधार हो’ एमालेको इतिहास, सांगठानिक संरचना नै जित्ने पहिलो आधार हो। यस्तै‚ एमाले नेतृत्वको तीनै तहका सरकारले गरेका काम र उम्मेदवारको योग्यता‚ क्षमता नै हामीले जित्ने आधार हुन्।
‘हामीले जिते पोखरामा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्छौं’ पाँच पार्टीको जनाधार र पछिल्लो पटक नागरिकले देखाएको सदभाव नै हाम्रो जित्ने आधार हुन्। हामीले जित्यौं भने पोखरामा पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्छौं।
‘नेपाली जनता जस्तो अनुशासित संसारमा कोही छैन’ ‘रछ्यानमा फोहोर छ, त्यसलाई सफा नगरीकन तपाईले सरसफाइमा पीएचडी गरेर मात्रै हुन्छ? आफै गएर कुचो लगाए पो सफा हुन्छ। मैले गर्ने त्यही हो।’
‘घोराहीलाई नेपालको नमूना उपमहानगरपालिका बनाउँछौं’ ‘गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको जनाधार र कार्यकर्ताहरू नै हाम्रो जित्ने पहिलो आधार हो। यस्तै‚ हाम्रा अजेन्डा र अघि सारिएका उम्मेदवार अर्को आधार हो।’
‘माओवादी द्वन्द्वबारे नयाँ पुस्तालाई पढाउनुपर्छ, देखाउनुपर्छ’ हरेक १० वर्षमा ‘जेनेरेशन ग्याप’ हुन्छ भनिन्छ। सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको पनि डेढ दशक भइसक्यो। हाम्रा पाठ्यपुस्तकमा यस्ता विषय अटाएका छैनन्। द्वन्द्वमा जनताले कति दु:ख पाए, द्वन्द्व कति डरलाग्दो थियो, द्वन्द्वले कति मानिस कसरी मरे, अब किन द्वन्द्व हुनु हुँदैन भनेर नयाँ पुस्तालाई बुझाउन जरुरी छ।
‘मतदाताको मन जित्ने गरी काम गरेकाले फेरि जित्नेमा विश्वस्त छु’ ‘अघिल्लो कार्यकालमा सडक, भवन, सिंचाइ, यातायात, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेको छु।’
‘समय तब बदलिन्छ, जब हामी समयलाई बदल्न अघि बढ्छौं’ "महिलाहरूले आन्तरिक रूपमा पितृसत्ता र आफ्नो हकअधिकारको लागि राज्यसत्तासँग एकै समयमा लड्नुपर्छ। घरभित्रको जेल तोड्नु पनि छ, आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको सवाल पनि छ। तर, महिलाहरूको लडाइँले धेरै ठूलो हल्लाखल्ला गर्दैन, यसै कारण मानिसको ध्यान तान्न मुश्किल हुन्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन यसै हराउँछ।"
‘कांग्रेस विधानले हँसिया-हथौडामा भोट हाल्न अनुमति दिंदैन, त्यसैले केन्द्रको आदेश अवज्ञा गरें’ ‘निष्ठाको राजनीति गर्ने भएकाले गठबन्धनले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ, कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्त संरक्षण हुन्छ भन्ने मलाई लागेन।’
'मेरो पक्षमा जनताको माहोल भएकाले निर्विरोध निर्वाचित भएँ' 'उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय सकिने आधा घण्टा अघिसम्म पनि प्रतिद्वन्द्वीहरू त्यहाँ थिए। जनताको माहोल मप्रति देखेरै उनीहरूले मैदान छाडेका हुन्। यसको अर्थ म जनताबाट अनुमोदित हुँ।'
‘पत्रकारिता सामाजिक सञ्जालको कोलाहलमा फस्ने जोखिम छ’ ‘पञ्चायती व्यवस्था गइसके पनि राजनीतिक दलहरू पञ्चायती शासन प्रणालीको केही उपलब्धि नक्कल गर्ने अभ्यास गरिरहेका देखिन्छन्। त्यसैले उपयुक्त विकेन्द्रीकरणको मोडल अपनाउन नेपाललाई अझ केही समय लाग्ने देख्छु।’
‘अन्य देशमा प्रतिबन्धित फिल्म देखाउने मञ्च हो, नेपाल’ श्रीलंकाले ‘नो फायर जोन’ देखाउन रोक लगायो। त्यो वृतचित्र २०१३ मा यही यलमाया केन्द्रमा देखाइयो। महोत्सवकै कारण वृत्तचित्रमा उठाइएको आवाज बाहिर आयो।
‘श्रीलंकासँग तुलना गर्नै मिल्दैन, नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन’ ‘स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सुविधाजनक स्थितिमा छ भन्ने दाबी गर्दिनँ, तर आत्तिनुपर्ने स्थिति पनि छैन।’
‘स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा सार्न मिल्दैन’ ३० वैशाखमा निर्धारित स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग संवाद:
शेफ सन्तोष साहसँग भलाकुसारी: ‘नेपाली रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्न किताब लेखें’ "म नेपाली खानाको प्रवर्द्धन गर्छु, त्यसले मलाई सम्मान दिएको छ। भान्छेले ल्याएको क्रान्ति होइन र यो?"
‘कृषिसँग जोडिएको दासप्रथा अझै कायम रहेछ’ दलका केही नेतालाई प्रश्न गर्दा उनीहरू बोल्न सकेनन्। कतिपय ठाउँमा हलियाका नाममा संगठन पनि रहेछन् तर तिनको काम पैसा खाने मात्र रहेछ। बझाङमा हलिया संगठनका उपाध्यक्ष भनिएका व्यक्ति हलिया नै नभएको भेटियो।
‘मेयरमा उठ्ने तयारीमा छु, यस पटक माओवादीले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ’ कांग्रेस चितवनले अघिल्लो चुनावमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई सहयोग गर्‍यो। अब माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसका सबै एकढिक्का भएर अगाडि बढिरहेका छौं।
श्रीलंकामा एक लिटर दूधकै दुई हजार पर्छ, नेपालमा त्यस्तो हुन नदिन के गर्ने? ‘श्रीलंकाको सङ्कटमा अलिकति चीनको हात नभएको होइन, तर चीनकै कारणले सबै भएको चाहिं होइन। महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका लागि महँगो ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिएपछि समस्या उत्पन्न भयो।’
‘नेपाललाई परेको समस्याबारे प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण र त्यस क्रममा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयको सेरोफेरोमा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँग गरिएको संवादः
चट्याङ लागेर सुदूरपश्चिममा चार जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चट्याङ लागेर मंगलबार चार जनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीमा दुई र कञ्चनपुरमा दुई जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
एसपीपीलाई लेखिएको पत्रमा टिपेक्स लगाइएको छ‚ सरकारले सक्कली पत्र सार्वजनिक गरोस्: ओली नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुन अगाडि नै अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुन तत्कालीन प्रधानसेनापतिले पत्र लेखेको दाबी गरेका छन्।
वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी घोषणा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा भएको छ। मंगलबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गरी गौतमले पार्टी घोषणा गरेका हुन्।
निजगढमा न्यायालय भर्सेस संसद् र सरकार
निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध संसदीय समिति र सरकारका मन्त्रीहरू खनिएको घटना संवैधानिक अराजकताको दृष्टान्त हो।
यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति असहिष्णु समाज
समाजमा खुल्न नसकेर स्वतन्त्रता खोज्दै डिजिटल दुनियाँमा पुगेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले त्यहाँ पनि हिंसाको सामना गर्नुपरिरहेको छ।
महिन्द्राले आफ्नो एसयूभी ‘अल न्यू स्कर्पियो एन’ मोडेल सार्वजनिक गरेको छ। भारत‚ नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा एकैसाथ सार्वजनिक गरिएको हो।
भारतीय बजारमा बढ्यो टाटा मोटर्स गाडीको मूल्य
भारतीय अटोमोबाइल कम्पनी टाटा मोटर्सले आफ्नो गाडीको मूल्य बढाएको छ।
इन्धन मूल्यवृद्धिको मारमा हवाई उडान
‘उड्डयन विलासिता हो भन्ने मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ। यो एक सेवा हो।’